(10) - BookCubicle
အပိုငျး - ၁၀ (ဇာတျသိမျး) ငါတို့ကတဈယောကျကိုတဈယောကျခဈြကွတယျ။
ဒီလိုနဲ့ခနျ့ဝသေျောနဲ့ယှနျးခြီရဲ့အခွအေနကေ ပိုတိုးတကျလာတော့တယျ။ ကြောငျးမှာဆိုသူတို့နှဈယောကျက ခှဲမရတော့တဲ့ လူတှအေလားပဲ။ ယှနျးခြီရှိတဲ့နရောမှာခနျ့ဝသေျောက အမွဲရှိနတေတျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ဆိုငျကယျနောကျက ပထမဆုံးနဲ့နောကျဆုံးလကျခှငျ့ရတဲ့လူကလညျး ယှနျးခြီပါပဲ။
ယှနျးခြီက ကိတျမုနျ့တှကေို ကွိုကျတယျ။ ယှနျးခြီအနှဈသကျဆုံးက စတျောဘယျရီသီးဖွဈပွီးတော့၊ အသုံးအဆောငျမှာဆို ယှနျးခြီက မာဖလာတှကွေိုကျတယျ။ သူတို့ရဲ့အေးတတျတဲ့ တောငျပျေါမွို့လေးရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ဆို ယှနျးခြီကွိုကျတဲ့ မာဖလာတှကေ အရမျးကို အဆငျပွတောပါပဲ။ ယှနျးခြီက မွဈကမျးနားမှာလမျးလြှောကျရတာကိုလညျး သဘောကပြါသေးတယျ။
“မငျး တဈနေ့ ဘယျကို အလညျသှားခငျြလဲ…”
ခနျ့ဝသေျောမေးတဲ့အခါမှာ ယှနျးခြီက ပြျောပြျောပဲ ဖွခေဲ့တယျ။
“ငါ မကျြစိတဈဆုံးမှာရှိနမေဲ့ ရပွေငျကိုကွညျ့ခငျြတယျ…”
“မွဈကို ဒေါငျလိုကျကွညျ့လညျး မငျး ရကေိုမွငျရမှာပဲလေ…”
“ဒါပမေဲ့ မွဈက အနံတိုတိုလေးလေ!”
ကွညျ့… ယှနျးခြီနဲ့သူက အခုလိုမြိုးမဟုတျတာလေးတှနေဲ့လညျး ငွငျးခုနျတတျတယျ။ ပွီးတော့လညျး ရယျကွတာပဲ။
“တဈခြိနျကရြငျ မငျးကိုငါ ပငျလယျဆီကို ချေါသှားပေးမယျ…”
ကိုယျ့နားထငျကိုယျအသာလေးကုတျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျော ရှကျရှကျနဲ့ပွောရငျ ယှနျးခြီက အငျးဆိုပွီး ခေါငျးလေးကို အားတကျသရောဆတျခနဲညိတျပွီး ပွနျဖွတေတျပါတယျ။ အဲ့လိုအခြိနျမြိုးဆိုရငျ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီမကျြနှာကို လကျနှဈဖကျလုံးနဲ့အုပျကိုငျ ယှနျးခြီနှုတျခမျးတှကေို ငုံ့နမျးလိုကျခငျြတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ သူ မလုပျရဲဘူး။ တဈသကျလုံးမှာ ယှနျးခြီက သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး ရညျးစားလေ။ သူ ဘယျလိုလုပျပွီး အခုလိုတှေ စိတျရှိတိုငျးလုပျရဲမှာလဲ!
“အဲ့ဒီတော့… နငျနဲ့သူနဲ့က ရညျးစားတှမေဟုတျကွဘူးပေါ့!”
ဖုနျးထဲက ဟနျနာ့အျောသံကကယျြကယျြလောငျလောငျပါပဲ။ ယှနျးခြီအသံတိုးတိုးလေးနဲ့ပဲပွနျပွောနိုငျတယျ။
“ငါ ပွောမယျ သူက နငျ့ကို အခုထိ ဘာတဈခှနျးမှမပွောဘူးလား?”
ယှနျးခြီ ကွောငျတကျတကျလေးပွနျမေးတယျ။ ဟနျနာကတော့ သူ့အဈကိုကို ငတုံးရယျ… ငတုံးရယျ…လို့ အျောအျောပွီး ရိုကျလိုကျခငျြတော့တာပါပဲ။
“ဘာမှမဟုတျဘူးဆိုရငျ နငျတို့က ဘာကိစ်စနဲ့အဲ့လောကျ တပူးပူးတတှဲတှဲဖွဈနရေတာလဲ…”
ယှနျးခြီအတိုခြုံးပွီးပွနျပွောလိုကျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက သူနဲ့သာတှဲနရေငျ ယှနျးကသူဆိုတာကို တိတျတိတျလေးနပေေးမယျဆိုတဲ့အကွောငျးကိုပေါ့။ ဖုနျးကိုကိုငျပွီး ဟနျနာ မကျြလုံးတှပေဲ ထိုငျလှနျနလေိုကျတော့တယျ။ တကယျလို့ သူမသာ ခနျ့ဝသေျောက ဒီသူမရဲ့အဈကိုကို ကွိုကျနကွေောငျးမသိဘူးဆိုရငျ ယှနျးခြီအနိုငျကငျြ့ခံနရေတယျလို့ တှေးလိုကျမိမှာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို သဘောကနြတေယျ။ သဘောကတြာမှ အရူးအမူးပဲ။ သူက မရှကျမကွောကျနဲ့ ခဈြတာလို့တောငျ သူမရှမှေ့ာ ပွောသှားခဲ့သေးတယျ။
ဟနျနာရဲ့အသံတိုးတိုးနဲ့စိတျဆိုးဆိုးရရှေတျနမှေုက ယှနျးခြီဘကျမှာတော့ ဗလုံးဗထှေးပေါ့။
“ဟငျ့အငျး… မဟုတျဘူး… ထားပါတော့ အဲ့ဒီတော့ နငျက သူနဲ့တှဲနတေယျပေါ့…”
ယှနျးခြီရဲ့အသံက တကယျကို ပိစိလေး။ ဟနျနာကတော့ သိနပွေီးသားအကွောငျးအရာတဈခုမို့ ထှထေူးပွီး ပွောမနတေော့ဘူး။ ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောကို သဘောကတြာ သိသာတယျ။ လုံးဝသိသိသာသာပဲ။ သူမ အတှကျပွောပါတယျ။
“ဒါပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးကို သဘောကနြတော…”
စိတျပကျြအားလြော့တဲ့အသံနဲ့ ယှနျးခြီပွောတယျ။ ဒီနှဈယောကျက ဘာလို့မြား ကိုးရီးယားကားရိုကျနကွေတာလဲလို့ ဟနျနာ စိတျပကျြပကျြနဲ့တှေးတယျ။ တကယျလို့ ခနျ့ဝသေျောသာ သူမရဲ့ ခပျတုံးတုံးအဈကိုဝမျးကှဲကို ငါ မငျးကိုခဈြလို့ဟေးလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလိုကျရငျ အခုလိုဖွဈစရာအကွောငျးကို မရှိဘူး။ နောကျပွီး ခနျ့ဝသေျောက တုံးတာနဲ့ပဲ ယှနျးခြီကရော လိုကျတုံးစရာလိုလို့လား။ ပွောခငျြတာက နှဈယောကျလုံးက ယောကျြားလေးတှလေနေျော။ ဘာရှကျစရာလိုလို့လဲ။ မငျး ငါ့ကိုကွိုကျလို့တှဲခငျြတာလားလို့ ယှနျးခြီအနနေဲ့လညျး မေးလို့ရနတောပဲကို။
ဟနျနာရဲ့ခပျရှဲ့ရှဲ့စကားကို ယှနျးခြီအတျောကွာကွာစဉျးစားနလေိုကျတယျ။ အငျး… အဲ့ဒါက… သဘာဝကတြယျ။
ဟနျနာက ထပျပွောပွနျတယျ။ ယှနျးခြီတဈယောကျက နောကျကလူတဈယောကျယောကျက မတှနျးဘူးဆိုရငျ ဘာတဈခုမှလုပျတတျမဲ့လူတဈယောကျမဟုတျဘူး။
သူ ခပျတိုးတိုးပွောတယျ။ စိတျထဲကခြိတုံခတြုံနဲ့ပေါ့။ ဒါပမေဲ့လညျး နောကျဆုံးတော့ သိခငျြစိတျက အနိုငျရသှားခဲ့ပါတယျ။ ဟုတျတယျ…သူ သိခငျြတယျ။
“အငျး… ငါ မေးကွညျ့ကွညျ့လိုကျမယျလေ…”
“Go… Go ငါ့အဈကို…”
ဟနျနာကမဟုတျတာလုပျဖို့အတှကျ မွှောကျပေးတဲ့လူတဈယောကျရဲ့ အသံမြိုးနဲ့အျောတယျ။ ယှနျးခြီ နညျးနညျးလေး စိတျညဈနရေတဲ့ကွားထဲကနေ သူ ပွုံးမိသေးတယျ။ ဒီညီမလေးတဈယောကျက သူ့အတှကျ မရှိမဖွဈပါဘဲ။ သူမက အမွဲတမျး သူ့ဘေးနားမှာ ရှိတတျတယျ။ သူဘာလုပျလုပျ အမွဲတမျး ထောကျခံပေးတယျ။ အဲ့ဒါက သူ့ကို အားတကျစတေယျ။
ဟနျနာနဲ့ဖုနျးပွောပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ယှနျးခြီ ခုတငျပျေါမှာ ခွပေဈလကျပဈလှဲတယျ။ မမှီမကမျးနဲ့ သူ့ခုတငျပျေါ တကျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ ဖငျတလှုပျလှုပျနဲ့ ပှနျးခြိကိုကွညျ့ပွီး သူရယျတယျ။ ပှနျးခြိရဲ့ မကျြနှာလေးက အနိုငျကငျြ့ခံရတဲ့ ခှေးကလေးလို ဖွဈသှားတော့တယျ။ နောကျဆုံးတော့ မနသောတော့ဘဲ သူ ပှနျးခြိကိုကောကျခြီတယျ။ ပှနျးခြိနှာသီးထိပျစုစုနဲ့ သူ့နှာခေါငျးကို တိုကျတော့ ပှနျးခြိက သူ့ကို လြှာနဲ့လကျြလာလရေဲ့။
“ဟေ့ ဟေ့ ကွညျ့ ငါ မကျြနှာသဈရတော့မယျ…”
ယှနျးခြီက ပှနျးခြိကို ဆူတာလညျးမဟုတျတဲ့အသံမြိုးနဲ့ ငေါကျငမျးခငျြယောငျဆောငျတယျ။ ဒီအကောငျပေါကျလေးက သူ့ အသညျးကြျောလေးပဲဟာ သူ ဘယျလိုလုပျပွီး ဆူရကျမှာလဲ။ ပှနျးခြိက သူ့ ခွအေိတျတှကေို ကိုကျစုတျပဈရငျတောငျ သူ မဆူပါဘူး။ အဲ့လောကျတောငျ သူ ခဈြတာပါ။
“ငါ သူ့ကို ဘယျလိုစမေးရငျကောငျးမလဲ…”
ပှနျးခြိကိုကွညျ့ပွီး ယှနျးခြီတိုးတိုးလေးမေးတယျ။ ပှနျးခြိအဖွကေ ဝုတျဝုတျဆိုတာအပွငျမရှိပါဘူး။ အဆဈအနနေဲ့ သူ့ မကျြနှာကို လိုကျလကျြတာတောငျ ပါသေးတယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ဖုနျးသံမွညျလာတော့တယျ။ ဖုနျးချေါသူက ခနျ့ဝသေျောဖွဈနတောကွောငျ့ ပှနျးခြိကို ခြီမွှောကျထားရငျးကနေ ရငျထဲပိုကျလိုကျတယျ။
“ငွိမျငွိမျနနေျော…” လို့ ပှနျးခြိကို ပွောပွီးတော့မှ သူ ဖုနျးကို ကိုငျတယျ။
ခနျ့ဝသေျောက အမွဲတမျး ဖွဈခငျြတာကိုပဲ တဲ့တိုးပွောတတျသူပါ။
“အငျး… ဟေ့ ပှနျးခြိ…”
ခနျ့ဝသေျောကို အငျး လို့ပွောနရေငျးနဲ့ သူ့မေးစကေို့ လာလကျြတဲ့ ပှနျးခြိကို ယှနျးခြီမာနျမဲရတယျ။
တဈခါတညျးလာဖူးပမေဲ့လညျး ပှနျးခြိနဲ့ရငျးနှီးနတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောက မေးတော့တာပေါ့။
“မငျးဖုနျးလာတုနျး သူ့ကိုခြီထားတာ… အဲ့ဒါ င့ါမေးစကေို့ လာလကျြနလေို့…”
ခနျ့ဝသေျော အသံတိတျသှားတယျ။ တျောတျောကွာတာကွောငျ့ ဖုနျးလိုငျးမြား တဈခုခုဖွဈတာလားဆိုပွီး ယှနျးခြီ ဟယျလို လုပျရပွနျတယျ။
“ပှနျးခြိနရောမှာ ငါဖွဈရငျ ကောငျးမှာပဲ…”
ခနျ့ဝသေျောရဲ့ စကားသံတိုးတိုးလေးထှကျလာတယျ။ ယှနျးခြီမကျြနှာတဈခုလုံး ရဲသှားတယျ။
“ငါတို့ မနကျဖွနျမှ တှရေ့အောငျ…”
ရှကျရှကျနဲ့ယှနျးခြီဖုနျးခလြိုကျတယျ။ တဈဖကျခနျ့ဝသေျောက ဖုနျးကိုကိုငျရငျး သူ့နှုတျခမျးသူ မခငျြ့မရဲလြှာနဲ့သပျနခေဲ့တယျ။ ယှနျးခြီရဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးမှုက သူ့စိတျကို တကယျမခငျြ့မရဲဖွဈစတေယျ။ နောကျတဈနေ့… ရုပျရှငျရုံထဲမှာ အခှငျ့အရေးပေးရငျ ယှနျးခကြို သူ နမျးလို့ရမှာပါနျော။ အဲ့အခြိနျကရြငျ သူ့ စိတျက အရမျးလှုပျရှားနပွေီး အလှဲလှဲအခြျောခြျော မဖွဈနဖေို့ကို ခနျ့ဝသေျော မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ရာသီဥတုက နှဦေးဘကျကို ရောကျနပွေီမို့ သူတို့တှေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတျလို့ရတယျ။ ယှနျးခြီကိုတှတေဲ့အခြိနျမှာ ခနျ့ဝသေျောရဲ့မကျြလုံးတှကေ ကွယျတှတေောကျနတေဲ့အလားပဲ။ ယှနျးခြီက ဘောငျးဘီဒူးဖုံးလေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှပျလေးတဈထညျ ဝတျထားတယျ။ ဘေးလှယျအိတျသေးလေးတဈလုံးလှယျလို့ပေါ့။ ဦးထုတျဝိုငျးလေးဆောငျးထားတဲ့ ပုံလေးက ယှနျးခြီကို ခဈြစရာ ယုနျငယျလေးလို ဖွူစငျတဲ့ခံစားခကျြကို ပေးတယျ။
သူ ဒီယုနျလေးကို နမျးခငျြလိုကျတာ။ ခနျ့ဝသေျော အကွံဆိုးကွီးနဲ့တှေးတယျ။
ရုပျရှငျသာကွညျ့မှာ ရုံမှာ ဘာကားတငျနမှေနျး သူတို့နှဈယောကျလုံး မသိကွဘူး။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ သူက အရငျဖိတျချေါတဲ့သူမို့ ဘာကားတှတေငျနတေယျဆိုတာတော့ ကွညျ့ထားခဲ့တယျ။
သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးဒိတျကို သူ ကောငျးကောငျးလေး ဖွဈစခေငျြတယျလေ။
“ဘာကားကွညျ့မလဲ… သူတို့က သရဲကားတဈကား၊ အခဈြကားတဈကား တငျထားတယျ…”
သူတို့မွို့ရဲ့ Shopping Mall ထဲမှာ ရုပျရှငျရုံနှဈခုရှိတယျ။
စကျလှကေားနဲ့တကျနရေငျးနဲ့ ယှနျးခြီ ခပျတိုးတိုးပွနျပွောတယျ။ ဘာကားကွညျ့မလဲ စဉျးစားနပေုံပါပဲ။ ယှနျးခြီရဲ့ လကျသှယျလေးတှကေ စကျလှကေားရဲ့ လကျရမျးပျေါမှာ ရှိနလေို့ပေါ့။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့အကွညျ့တှကေ ယှနျးခြီရဲ့ လကျခြောငျးလေးတှဆေီရောကျသှားတယျ။ ရှညျရှညျသှယျသှယျလကျသညျးခှံလေးတှကေ သခြောထိနျးသိမျးထားတာကွောငျ့ ပနျးသှေးရောငျလေးတှေ။ သူ အဲ့ဒီလကျကလေးတှကေို ကိုငျထားခငျြတယျ။
“ဝေ့ ငါပွောနတောကို မငျးမကွားဘူးလား…”
အဲ့ဒီလကျကလေးတှကေ သူ့မကျြလုံးရှကေို့ရောကျလာတယျ။ လကျဖဝါးလေးကို ဟိုယမျးဒီယမျးလုပျပွီး ယှနျးခြီ သူ့မေးခှနျးကို မဖွလောတဲ့ခနျ့ဝသေျောကို မေးခှနျးထုတျတာပါ။ တကယျလို့ သူတို့က စကျလှကေားပျေါမှာ မဟုတျဘူးဆိုရငျ သူ အဲ့ဒီလကျကလေးတှကေို ယူပွီးနမျးမိလောကျတယျလို့ ခနျ့ဝသေျော တှေးတယျ။ မဟုတျဘူး အတိအကပြွောရငျ ယှနျးခြီကို သူ ငုံသာထားလိုကျခငျြတော့တယျ။ အသဲယားစရာကောငျးလှနျးလို့။
“မငျး လကျကို ငါ ကိုငျလို့ရမလား?”
ယှနျးခြီကွောငျအပွီး ခနျ့ဝသေျောကို ကွညျ့တယျ။ သူ့မကျြလုံးတှအေရငျဝိုငျးသှားတယျ၊ နောကျတော့ သူ့မကျြနှာနီသှားတယျ၊ မကျြလှာခပြွီးတော့ ခေါငျးကိုဆကျငုံ့တယျ။
ခဈြစရာကောငျးလိုကျတာ… ခနျ့ဝသေျော တိတျတိတျလေးတှေးမိပွနျတယျ။
ခေါငျးလေးငုံ့ပွီး ကမျးပေးလာတဲ့လကျကလေးက သူ့လကျနဲ့အံဝငျခှငျကပြါပဲ။
လကျတှဲပွီးတော့ သူတို့လြှောကျလာဖွဈကွတယျ။ လူမြားတဲ့ Shopping Mall မှာ ကောငျလေးနှဈယောကျ လကျတှဲတာကို အထူးတဆနျးကွညျ့တဲ့လူလညျးရှိပမေဲ့ မကွညျ့တဲ့လူဦးရကေ ပိုမြားပါတယျ။ ဘာလို့ဆို လူတှကေ ကိုယျ့အာရုံနဲ့ကိုယျပဲလေ။
ယှနျးခြီရဲ့တဈကိုယျလုံး တုံ့ခနဲဖွဈသှားတယျ။ သူတို့ကိုသိတဲ့လူတဈယောကျယောကျလား? ထငျတဲ့အတိုငျးပါပဲ အနောကျကိုလှညျ့ကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ သူတို့တှတေ့ာက ခနျ့ဝသေျောရဲ့ လူရမျးကားလေးအုပျစုပါပဲ။ သူ့လကျကိုတှဲထားတဲ့ ခနျ့ဝသေျောလကျကို ဖွုတျခဖြို့ သူ ကွိုးစားပမေဲ့ မအောငျမွငျခဲ့ဘူး။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့လကျကို တငျးတငျးဆုတျကိုငျထားခဲ့တယျ။
အမွှာနှဈကောငျရဲ့မကျြနှာပေးက ညဈကယျြကယျြဖွဈသှားတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို မရိုးသားမှနျး သူတို့သိပမေဲ့ အခုလောကျထိ မကျြနှာပွောငျရှငျးရဲတငျးလိမျ့မယျလို့တော့ သူတို့မထငျမိဘူး။ ပိတျရကျ လူတိုငျးလာနိုငျတဲ့ Shopping Mall ကို သူတို့က လကျခငျြးတှဲလြှောကျနတေယျ။ ဟဟဟ ဒါက သိပျကိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးတာပဲ။
ယှနျးခြီကိုမှ မဟုတျဘူးဆိုရငျ ခနျ့ဝသေျောရဲ့အဘိဓာနျမှာ စိတျရှညျခွငျးဆိုတဲ့ စကားလုံးမပါဝငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အမွှာနှဈကောငျရဲ့အခုလိုမြိုးမေးခှနျးကို သူ တိုတိုတုတျတုတျပဲဖွတောပေါ့။
သူတို့တဈဖှဲ့လုံးတိတျသှားတယျ။ အကုနျလုံးပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ခနျ့ဝသေျောကို ကွညျ့တယျ။ အမွှာနှဈကောငျက လှဲလို့ပေါ့။ သူတုိ့ကတော့ ခနျ့ဝသေျောကို ဘယျလိုမြိုးကွပျရကောငျးမလဲစဉျးစားနခေဲ့တယျ။ သူတို့စဉျးစားနတေုနျးမှာပဲ အုပျစုထဲက ကောငျတဈကောငျရဲ့ အသံထထှကျလာတယျ။
“မငျး… မငျးက ယောကျြားလေးကို ကွိုကျတာလား!”
အသံနညျးနညျးကယျြသှားတာကွောငျ့ ဘေးက လကျမွနျတဲ့ကောငျတှကေ အဲ့ကောငျရဲ့ပါးစပျကို အုပျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို ကစားနတောလညျးဖွဈနိုငျတာပဲ။
“ငါ ယှနျးခြီကို သဘောကတြယျ…”
“ယှနျးခြီက ယောကျြားလေးမို့ ငါ ယောကျြားလေးကိုကွိုကျတာပေါ့…”
သူ့အဖွကေ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပါပဲ။ ယှနျးခြီ ခေါငျးလေးငုံ့နရောကနေ ဆတျခနဲထောငျလာတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ဘာဖွဈတယျ?
ယှနျးခြီရဲ့ ကွောငျတကျတကျစကားကွောငျ့ တဈအုပျစုလုံးရဲ့အကွညျ့က ယှနျးခြီဆီရောကျသှားတယျ။ အမျ သူတို့လကျတောငျတှဲနပွေီးမှ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကိုသဘောကတြယျဆိုတာကို ဘာလို့ ဒီအုနျးမုတျခှကျလေးက ရှော့ချအကွီးကွီး ရနသေလိုမြိုးဖွဈနရေတာလဲ။
အမွှာစကားကို ဖွတျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျောပွောတယျ။ ရုတျတရကျကောငျကလေးတဈသိုကျမှာ ခှေးစာတှနေဲ့အပကျခံလိုကျရသလိုပဲ။ ဟယျလို တဈတီတူးခဈြရညျလူးစကားတှပွေောရမဲ့နရောမဟုတျဘူးနျော! ဒါက ရှောပငျးမော လမျးကွီး! လမျးမကွီး!
“အာ… ငါ… ငါက…”
“ငါက မငျးငါ့ကို မခဈြဘူးထငျနတော…”
ခနျ့ဝသေျော နားမလညျစှာမေးတယျ။ ဘာလို့ယှနျးခြီက အဲ့လိုထငျနရေတာလဲ။ ယှနျးခြီကွောငျ့ပဲ သူ ရနျပှဲတှေ နညျးလာတာလေ။ ယှနျးခြီကွောငျ့ပဲ သူ အတနျးမှနျလာတာလေ။
ခနျ့ဝသေျော သူ့ခေါငျးသူကုတျတယျ။ နောကျတော့ မကျြနှာနီနီနဲ့…
“ငါ လူတဈယောကျကို တဈခါလေးတောငျ ဖှငျ့မပွောဖူးခဲ့ဘူး…”
လူတှအေနားမှာရှိနတေယျဆိုတာကု ခနျ့ဝသေျောမနေ့ပေုံပါပဲ။ ရနျပှဲတိုငျး လကျရဲလှနျးတဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အခုလိုပုံစံက သူရဲ့သူငယျခငျြးတဈအုပျစုလုံးကို ဆှံ့အစတေယျ။
“ဒါကွောငျ့ ငါ ဘယျလိုပွောရမလဲဆိုတာကို မသိဘူး… ဒါပမေဲ့ ငါ မငျးကိုခဈြတာပါ… မငျးက ငါ့ရဲ့အခဈြဦးပါပဲ…”
မကျြနှာနီနတေဲ့ကောငျလေးနှဈယောကျနဲ့ မကျြနှာကိုဘယျလိုထားရငျကောငျးမလဲမသိတဲ့ရူးနှမျးနှမျးမကျြနှာထားနဲ့ ကောငျလေး လေးယောကျရှိခဲ့တယျ။ ဘာမြားလဲဆိုပွီး စပျစုခငျြတဲ့လူတခြို့ကလညျး ရပျကွညျ့ကွလရေဲ့။
ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောလကျကိုဆှဲပွီးတော့ အခုနရောကနထှေကျလာတယျ။ ရှကျစရာကောငျးလိုကျတာ။ ဒီနားမှာ လူတှကေလညျးကွညျ့နပွေီ။
ခွတေိုတိုလေးတှနေဲ့ လမျးမွနျမွနျလြှောကျနတေဲ့ ယှနျးခြီကို ခနျ့ဝသေျော နားမလညျစှာမေးတယျ။
“ငါ မငျးကိုခဈြတာကို လူကွားထဲမှာ ဘယျလိုလုပျပွီးတော့ ပွောရမှာလဲ?!”
မတိုးမကယျြနဲ့ ခနျ့ဝသေျောကို သူ ငေါကျတယျ။ သူတို့ရဲ့ခွလှေမျးတှရေပျသှားခဲ့တယျ။ ယှနျးခြီရဲ့လညျကုတျတှကေ နမျးပဈခငျြလောကျအောငျ နီရဲနခေဲ့တယျ။
“ငါ မငျးကို ဖကျထားခငျြလို့ မကွောကျတတျရငျတောငျ ကွောကျဟနျဆောငျပွီး ငါ့ရငျထဲ ဝငျတိုးပေးပါလား…”
ယှနျးခြီရဲ့လကျတှကေပိုပွီး တငျးကွပျသှားတယျ။ ခနျ့ဝသေျောကပဲ ယှနျးခြီကို အသဲယားတာတော့မဟုတျပါဘူး။ ယှနျးခြီကလညျး ခနျ့ဝသေျောကို အသဲယားပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ သူ ခနျ့ဝသေျောကို အတငျးဖကျထားခငျြတော့တယ။ျ တကယျပါပဲ။ ဒီလူသားလေးက သူ့ကို ရငျခုနျအောငျ တအားလုပျတာပဲ။
ဒီလိုနဲ့ကောငျလေးနှဈယောကျဟာ ပြျောစရာဇာတျသိမျးရှိတဲ့ ဇာတျလမျးလေးတှအေတိုငျးပဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခဈြကွောငျးကို ဖှငျ့ဟဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ သွျော သူတုိ့ကွညျ့တဲ့ ရုပျရှငျကားကိုတော့ သူတို့က ဇာတျလမျးပွီးသှားတာတောငျမှ ဇာတျလမျးပွီးသှားလားဆိုပွီး ဖွဈခဲ့ကွပါတယျတဲ့။
အပိုင်း - ၁၀ (ဇာတ်သိမ်း) ငါတို့ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ခန့်ဝေသော်နဲ့ယွန်းချီရဲ့အခြေအနေက ပိုတိုးတက်လာတော့တယ်။ ကျောင်းမှာဆိုသူတို့နှစ်ယောက်က ခွဲမရတော့တဲ့ လူတွေအလားပဲ။ ယွန်းချီရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ဝေသော်က အမြဲရှိနေတတ်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်က ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးလက်ခွင့်ရတဲ့လူကလည်း ယွန်းချီပါပဲ။
ယွန်းချီက ကိတ်မုန့်တွေကို ကြိုက်တယ်။ ယွန်းချီအနှစ်သက်ဆုံးက စတော်ဘယ်ရီသီးဖြစ်ပြီးတော့၊ အသုံးအဆောင်မှာဆို ယွန်းချီက မာဖလာတွေကြိုက်တယ်။ သူတို့ရဲ့အေးတတ်တဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ဆို ယွန်းချီကြိုက်တဲ့ မာဖလာတွေက အရမ်းကို အဆင်ပြေတာပါပဲ။ ယွန်းချီက မြစ်ကမ်းနားမှာလမ်းလျှောက်ရတာကိုလည်း သဘောကျပါသေးတယ်။
“မင်း တစ်နေ့ ဘယ်ကို အလည်သွားချင်လဲ…”
ခန့်ဝေသော်မေးတဲ့အခါမှာ ယွန်းချီက ပျော်ပျော်ပဲ ဖြေခဲ့တယ်။
“ငါ မျက်စိတစ်ဆုံးမှာရှိနေမဲ့ ရေပြင်ကိုကြည့်ချင်တယ်…”
“မြစ်ကို ဒေါင်လိုက်ကြည့်လည်း မင်း ရေကိုမြင်ရမှာပဲလေ…”
“ဒါပေမဲ့ မြစ်က အနံတိုတိုလေးလေ!”
ကြည့်… ယွန်းချီနဲ့သူက အခုလိုမျိုးမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့လည်း ငြင်းခုန်တတ်တယ်။ ပြီးတော့လည်း ရယ်ကြတာပဲ။
“တစ်ချိန်ကျရင် မင်းကိုငါ ပင်လယ်ဆီကို ခေါ်သွားပေးမယ်…”
ကိုယ့်နားထင်ကိုယ်အသာလေးကုတ်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော် ရှက်ရှက်နဲ့ပြောရင် ယွန်းချီက အင်းဆိုပြီး ခေါင်းလေးကို အားတက်သရောဆတ်ခနဲညိတ်ပြီး ပြန်ဖြေတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင် ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီမျက်နှာကို လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့အုပ်ကိုင် ယွန်းချီနှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံ့နမ်းလိုက်ချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ မလုပ်ရဲဘူး။ တစ်သက်လုံးမှာ ယွန်းချီက သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး ရည်းစားလေ။ သူ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အခုလိုတွေ စိတ်ရှိတိုင်းလုပ်ရဲမှာလဲ!
“အဲ့ဒီတော့… နင်နဲ့သူနဲ့က ရည်းစားတွေမဟုတ်ကြဘူးပေါ့!”
ဖုန်းထဲက ဟန်နာ့အော်သံကကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပါပဲ။ ယွန်းချီအသံတိုးတိုးလေးနဲ့ပဲပြန်ပြောနိုင်တယ်။
“ငါ ပြောမယ် သူက နင့်ကို အခုထိ ဘာတစ်ခွန်းမှမပြောဘူးလား?”
ယွန်းချီ ကြောင်တက်တက်လေးပြန်မေးတယ်။ ဟန်နာကတော့ သူ့အစ်ကိုကို ငတုံးရယ်… ငတုံးရယ်…လို့ အော်အော်ပြီး ရိုက်လိုက်ချင်တော့တာပါပဲ။
“ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် နင်တို့က ဘာကိစ္စနဲ့အဲ့လောက် တပူးပူးတတွဲတွဲဖြစ်နေရတာလဲ…”
ယွန်းချီအတိုချုံးပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က သူနဲ့သာတွဲနေရင် ယွန်းကသူဆိုတာကို တိတ်တိတ်လေးနေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့။ ဖုန်းကိုကိုင်ပြီး ဟန်နာ မျက်လုံးတွေပဲ ထိုင်လှန်နေလိုက်တော့တယ်။ တကယ်လို့ သူမသာ ခန့်ဝေသော်က ဒီသူမရဲ့အစ်ကိုကို ကြိုက်နေကြောင်းမသိဘူးဆိုရင် ယွန်းချီအနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်လို့ တွေးလိုက်မိမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို သဘောကျနေတယ်။ သဘောကျတာမှ အရူးအမူးပဲ။ သူက မရှက်မကြောက်နဲ့ ချစ်တာလို့တောင် သူမရှေ့မှာ ပြောသွားခဲ့သေးတယ်။
ဟန်နာရဲ့အသံတိုးတိုးနဲ့စိတ်ဆိုးဆိုးရေရွတ်နေမှုက ယွန်းချီဘက်မှာတော့ ဗလုံးဗထွေးပေါ့။
“ဟင့်အင်း… မဟုတ်ဘူး… ထားပါတော့ အဲ့ဒီတော့ နင်က သူနဲ့တွဲနေတယ်ပေါ့…”
ယွန်းချီရဲ့အသံက တကယ်ကို ပိစိလေး။ ဟန်နာကတော့ သိနေပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်ခုမို့ ထွေထူးပြီး ပြောမနေတော့ဘူး။ ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်ကို သဘောကျတာ သိသာတယ်။ လုံးဝသိသိသာသာပဲ။ သူမ အတွက်ပြောပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းကို သဘောကျနေတာ…”
စိတ်ပျက်အားလျော့တဲ့အသံနဲ့ ယွန်းချီပြောတယ်။ ဒီနှစ်ယောက်က ဘာလို့များ ကိုးရီးယားကားရိုက်နေကြတာလဲလို့ ဟန်နာ စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့တွေးတယ်။ တကယ်လို့ ခန့်ဝေသော်သာ သူမရဲ့ ခပ်တုံးတုံးအစ်ကိုဝမ်းကွဲကို ငါ မင်းကိုချစ်လို့ဟေးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ရင် အခုလိုဖြစ်စရာအကြောင်းကို မရှိဘူး။ နောက်ပြီး ခန့်ဝေသော်က တုံးတာနဲ့ပဲ ယွန်းချီကရော လိုက်တုံးစရာလိုလို့လား။ ပြောချင်တာက နှစ်ယောက်လုံးက ယောကျာ်းလေးတွေလေနော်။ ဘာရှက်စရာလိုလို့လဲ။ မင်း ငါ့ကိုကြိုက်လို့တွဲချင်တာလားလို့ ယွန်းချီအနေနဲ့လည်း မေးလို့ရနေတာပဲကို။
ဟန်နာရဲ့ခပ်ရွဲ့ရွဲ့စကားကို ယွန်းချီအတော်ကြာကြာစဉ်းစားနေလိုက်တယ်။ အင်း… အဲ့ဒါက… သဘာဝကျတယ်။
ဟန်နာက ထပ်ပြောပြန်တယ်။ ယွန်းချီတစ်ယောက်က နောက်ကလူတစ်ယောက်ယောက်က မတွန်းဘူးဆိုရင် ဘာတစ်ခုမှလုပ်တတ်မဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။
သူ ခပ်တိုးတိုးပြောတယ်။ စိတ်ထဲကချိတုံချတုံနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း နောက်ဆုံးတော့ သိချင်စိတ်က အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်…သူ သိချင်တယ်။
“အင်း… ငါ မေးကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်လေ…”
“Go… Go ငါ့အစ်ကို…”
ဟန်နာကမဟုတ်တာလုပ်ဖို့အတွက် မြှောက်ပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသံမျိုးနဲ့အော်တယ်။ ယွန်းချီ နည်းနည်းလေး စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားထဲကနေ သူ ပြုံးမိသေးတယ်။ ဒီညီမလေးတစ်ယောက်က သူ့အတွက် မရှိမဖြစ်ပါဘဲ။ သူမက အမြဲတမ်း သူ့ဘေးနားမှာ ရှိတတ်တယ်။ သူဘာလုပ်လုပ် အမြဲတမ်း ထောက်ခံပေးတယ်။ အဲ့ဒါက သူ့ကို အားတက်စေတယ်။
ဟန်နာနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာ ယွန်းချီ ခုတင်ပေါ်မှာ ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲတယ်။ မမှီမကမ်းနဲ့ သူ့ခုတင်ပေါ် တက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဖင်တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ပွန်းချိကိုကြည့်ပြီး သူရယ်တယ်။ ပွန်းချိရဲ့ မျက်နှာလေးက အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ ခွေးကလေးလို ဖြစ်သွားတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မနေသာတော့ဘဲ သူ ပွန်းချိကိုကောက်ချီတယ်။ ပွန်းချိနှာသီးထိပ်စုစုနဲ့ သူ့နှာခေါင်းကို တိုက်တော့ ပွန်းချိက သူ့ကို လျှာနဲ့လျက်လာလေရဲ့။
“ဟေ့ ဟေ့ ကြည့် ငါ မျက်နှာသစ်ရတော့မယ်…”
ယွန်းချီက ပွန်းချိကို ဆူတာလည်းမဟုတ်တဲ့အသံမျိုးနဲ့ ငေါက်ငမ်းချင်ယောင်ဆောင်တယ်။ ဒီအကောင်ပေါက်လေးက သူ့ အသည်းကျော်လေးပဲဟာ သူ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆူရက်မှာလဲ။ ပွန်းချိက သူ့ ခြေအိတ်တွေကို ကိုက်စုတ်ပစ်ရင်တောင် သူ မဆူပါဘူး။ အဲ့လောက်တောင် သူ ချစ်တာပါ။
“ငါ သူ့ကို ဘယ်လိုစမေးရင်ကောင်းမလဲ…”
ပွန်းချိကိုကြည့်ပြီး ယွန်းချီတိုးတိုးလေးမေးတယ်။ ပွန်းချိအဖြေက ဝုတ်ဝုတ်ဆိုတာအပြင်မရှိပါဘူး။ အဆစ်အနေနဲ့ သူ့ မျက်နှာကို လိုက်လျက်တာတောင် ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖုန်းသံမြည်လာတော့တယ်။ ဖုန်းခေါ်သူက ခန့်ဝေသော်ဖြစ်နေတာကြောင့် ပွန်းချိကို ချီမြှောက်ထားရင်းကနေ ရင်ထဲပိုက်လိုက်တယ်။
“ငြိမ်ငြိမ်နေနော်…” လို့ ပွန်းချိကို ပြောပြီးတော့မှ သူ ဖုန်းကို ကိုင်တယ်။
ခန့်ဝေသော်က အမြဲတမ်း ဖြစ်ချင်တာကိုပဲ တဲ့တိုးပြောတတ်သူပါ။
“အင်း… ဟေ့ ပွန်းချိ…”
ခန့်ဝေသော်ကို အင်း လို့ပြောနေရင်းနဲ့ သူ့မေးစေ့ကို လာလျက်တဲ့ ပွန်းချိကို ယွန်းချီမာန်မဲရတယ်။
တစ်ခါတည်းလာဖူးပေမဲ့လည်း ပွန်းချိနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ ခန့်ဝေသော်က မေးတော့တာပေါ့။
“မင်းဖုန်းလာတုန်း သူ့ကိုချီထားတာ… အဲ့ဒါ င့ါမေးစေ့ကို လာလျက်နေလို့…”
ခန့်ဝေသော် အသံတိတ်သွားတယ်။ တော်တော်ကြာတာကြောင့် ဖုန်းလိုင်းများ တစ်ခုခုဖြစ်တာလားဆိုပြီး ယွန်းချီ ဟယ်လို လုပ်ရပြန်တယ်။
“ပွန်းချိနေရာမှာ ငါဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲ…”
ခန့်ဝေသော်ရဲ့ စကားသံတိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်။ ယွန်းချီမျက်နှာတစ်ခုလုံး ရဲသွားတယ်။
“ငါတို့ မနက်ဖြန်မှ တွေ့ရအောင်…”
ရှက်ရှက်နဲ့ယွန်းချီဖုန်းချလိုက်တယ်။ တစ်ဖက်ခန့်ဝေသော်က ဖုန်းကိုကိုင်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းသူ မချင့်မရဲလျှာနဲ့သပ်နေခဲ့တယ်။ ယွန်းချီရဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းမှုက သူ့စိတ်ကို တကယ်မချင့်မရဲဖြစ်စေတယ်။ နောက်တစ်နေ့… ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ အခွင့်အရေးပေးရင် ယွန်းချကို သူ နမ်းလို့ရမှာပါနော်။ အဲ့အချိန်ကျရင် သူ့ စိတ်က အရမ်းလှုပ်ရှားနေပြီး အလွဲလွဲအချော်ချော် မဖြစ်နေဖို့ကို ခန့်ဝေသော် မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရာသီဥတုက နွေဦးဘက်ကို ရောက်နေပြီမို့ သူတို့တွေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်လို့ရတယ်။ ယွန်းချီကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ခန့်ဝေသော်ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကြယ်တွေတောက်နေတဲ့အလားပဲ။ ယွန်းချီက ဘောင်းဘီဒူးဖုံးလေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှပ်လေးတစ်ထည် ဝတ်ထားတယ်။ ဘေးလွယ်အိတ်သေးလေးတစ်လုံးလွယ်လုိ့ပေါ့။ ဦးထုတ်ဝိုင်းလေးဆောင်းထားတဲ့ ပုံလေးက ယွန်းချီကို ချစ်စရာ ယုန်ငယ်လေးလို ဖြူစင်တဲ့ခံစားချက်ကို ပေးတယ်။
သူ ဒီယုန်လေးကို နမ်းချင်လိုက်တာ။ ခန့်ဝေသော် အကြံဆိုးကြီးနဲ့တွေးတယ်။
ရုပ်ရှင်သာကြည့်မှာ ရုံမှာ ဘာကားတင်နေမှန်း သူတို့နှစ်ယောက်လုံး မသိကြဘူး။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ သူက အရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူမို့ ဘာကားတွေတင်နေတယ်ဆိုတာတော့ ကြည့်ထားခဲ့တယ်။
သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးဒိတ်ကို သူ ကောင်းကောင်းလေး ဖြစ်စေချင်တယ်လေ။
“ဘာကားကြည့်မလဲ… သူတို့က သရဲကားတစ်ကား၊ အချစ်ကားတစ်ကား တင်ထားတယ်…”
သူတို့မြို့ရဲ့ Shopping Mall ထဲမှာ ရုပ်ရှင်ရုံနှစ်ခုရှိတယ်။
စက်လှေကားနဲ့တက်နေရင်းနဲ့ ယွန်းချီ ခပ်တိုးတိုးပြန်ပြောတယ်။ ဘာကားကြည့်မလဲ စဉ်းစားနေပုံပါပဲ။ ယွန်းချီရဲ့ လက်သွယ်လေးတွေက စက်လှေကားရဲ့ လက်ရမ်းပေါ်မှာ ရှိနေလို့ပေါ့။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့အကြည့်တွေက ယွန်းချီရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေဆီရောက်သွားတယ်။ ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်လက်သည်းခွံလေးတွေက သေချာထိန်းသိမ်းထားတာကြောင့် ပန်းသွေးရောင်လေးတွေ။ သူ အဲ့ဒီလက်ကလေးတွေကို ကိုင်ထားချင်တယ်။
“ဝေ့ ငါပြောနေတာကို မင်းမကြားဘူးလား…”
အဲ့ဒီလက်ကလေးတွေက သူ့မျက်လုံးရှေ့ကိုရောက်လာတယ်။ လက်ဖဝါးလေးကို ဟိုယမ်းဒီယမ်းလုပ်ပြီး ယွန်းချီ သူ့မေးခွန်းကို မဖြေလာတဲ့ခန့်ဝေသော်ကို မေးခွန်းထုတ်တာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့က စက်လှေကားပေါ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သူ အဲ့ဒီလက်ကလေးတွေကို ယူပြီးနမ်းမိလောက်တယ်လို့ ခန့်ဝေသော် တွေးတယ်။ မဟုတ်ဘူး အတိအကျပြောရင် ယွန်းချီကို သူ ငုံသာထားလိုက်ချင်တော့တယ်။ အသဲယားစရာကောင်းလွန်းလို့။
“မင်း လက်ကို ငါ ကိုင်လို့ရမလား?”
ယွန်းချီကြောင်အပြီး ခန့်ဝေသော်ကို ကြည့်တယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေအရင်ဝိုင်းသွားတယ်၊ နောက်တော့ သူ့မျက်နှာနီသွားတယ်၊ မျက်လွှာချပြီးတော့ ခေါင်းကိုဆက်ငုံ့တယ်။
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ… ခန့်ဝေသော် တိတ်တိတ်လေးတွေးမိပြန်တယ်။
ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး ကမ်းပေးလာတဲ့လက်ကလေးက သူ့လက်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျပါပဲ။
လက်တွဲပြီးတော့ သူတို့လျှောက်လာဖြစ်ကြတယ်။ လူများတဲ့ Shopping Mall မှာ ကောင်လေးနှစ်ယောက် လက်တွဲတာကို အထူးတဆန်းကြည့်တဲ့လူလည်းရှိပေမဲ့ မကြည့်တဲ့လူဦးရေက ပိုများပါတယ်။ ဘာလို့ဆို လူတွေက ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ်ပဲလေ။
ယွန်းချီရဲ့တစ်ကိုယ်လုံး တုံ့ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့ကိုသိတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်လား? ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေ့တာက ခန့်ဝေသော်ရဲ့ လူရမ်းကားလေးအုပ်စုပါပဲ။ သူ့လက်ကိုတွဲထားတဲ့ ခန့်ဝေသော်လက်ကို ဖြုတ်ချဖို့ သူ ကြိုးစားပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ခန့်ဝေသော်က သူ့လက်ကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားခဲ့တယ်။
အမြွှာနှစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာပေးက ညစ်ကျယ်ကျယ်ဖြစ်သွားတယ်။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို မရိုးသားမှန်း သူတို့သိပေမဲ့ အခုလောက်ထိ မျက်နှာပြောင်ရှင်းရဲတင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ သူတို့မထင်မိဘူး။ ပိတ်ရက် လူတိုင်းလာနိုင်တဲ့ Shopping Mall ကို သူတို့က လက်ချင်းတွဲလျှောက်နေတယ်။ ဟဟဟ ဒါက သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲ။
ယွန်းချီကိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခန့်ဝေသော်ရဲ့အဘိဓာန်မှာ စိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးမပါဝင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အမြွှာနှစ်ကောင်ရဲ့အခုလိုမျိုးမေးခွန်းကို သူ တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲဖြေတာပေါ့။
သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးတိတ်သွားတယ်။ အကုန်လုံးပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ခန့်ဝေသော်ကို ကြည့်တယ်။ အမြွှာနှစ်ကောင်က လွဲလို့ပေါ့။ သူတုိ့ကတော့ ခန့်ဝေသော်ကို ဘယ်လိုမျိုးကြပ်ရကောင်းမလဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ သူတို့စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ အုပ်စုထဲက ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ အသံထထွက်လာတယ်။
“မင်း… မင်းက ယောကျာ်းလေးကို ကြိုက်တာလား!”
အသံနည်းနည်းကျယ်သွားတာကြောင့် ဘေးက လက်မြန်တဲ့ကောင်တွေက အဲ့ကောင်ရဲ့ပါးစပ်ကို အုပ်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို ကစားနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။
“ငါ ယွန်းချီကို သဘောကျတယ်…”
“ယွန်းချီက ယောကျာ်းလေးမို့ ငါ ယောကျာ်းလေးကိုကြိုက်တာပေါ့…”
သူ့အဖြေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပါပဲ။ ယွန်းချီ ခေါင်းလေးငုံ့နေရာကနေ ဆတ်ခနဲထောင်လာတယ်။ ခန့်ဝေသော်က ဘာဖြစ်တယ်?
ယွန်းချီရဲ့ ကြောင်တက်တက်စကားကြောင့် တစ်အုပ်စုလုံးရဲ့အကြည့်က ယွန်းချီဆီရောက်သွားတယ်။ အမ် သူတို့လက်တောင်တွဲနေပြီးမှ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာကို ဘာလို့ ဒီအုန်းမုတ်ခွက်လေးက ရှော့ခ်အကြီးကြီး ရနေသလိုမျိုးဖြစ်နေရတာလဲ။
အမြွှာစကားကို ဖြတ်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော်ပြောတယ်။ ရုတ်တရက်ကောင်ကလေးတစ်သိုက်မှာ ခွေးစာတွေနဲ့အပက်ခံလိုက်ရသလိုပဲ။ ဟယ်လို တစ်တီတူးချစ်ရည်လူးစကားတွေပြောရမဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်! ဒါက ရှောပင်းမော လမ်းကြီး! လမ်းမကြီး!
“ငါက မင်းင့ါကို မချစ်ဘူးထင်နေတာ…”
ခန့်ဝေသော် နားမလည်စွာမေးတယ်။ ဘာလို့ယွန်းချီက အဲ့လိုထင်နေရတာလဲ။ ယွန်းချီကြောင့်ပဲ သူ ရန်ပွဲတွေ နည်းလာတာလေ။ ယွန်းချီကြောင့်ပဲ သူ အတန်းမှန်လာတာလေ။
ခန့်ဝေသော် သူ့ခေါင်းသူကုတ်တယ်။ နောက်တော့ မျက်နှာနီနီနဲ့…
“ငါ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ခါလေးတောင် ဖွင့်မပြောဖူးခဲ့ဘူး…”
လူတွေအနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကု ခန့်ဝေသော်မေ့နေပုံပါပဲ။ ရန်ပွဲတိုင်း လက်ရဲလွန်းတဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အခုလိုပုံစံက သူရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်အုပ်စုလုံးကို ဆွံ့အစေတယ်။
“ဒါကြောင့် ငါ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကို မသိဘူး… ဒါပေမဲ့ ငါ မင်းကိုချစ်တာပါ… မင်းက ငါ့ရဲ့အချစ်ဦးပါပဲ…”
မျက်နှာနီနေတဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ မျက်နှာကိုဘယ်လိုထားရင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့ရူးနှမ်းနှမ်းမျက်နှာထားနဲ့ ကောင်လေး လေးယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ဘာများလဲဆိုပြီး စပ်စုချင်တဲ့လူတချို့ကလည်း ရပ်ကြည့်ကြလေရဲ့။
ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ အခုနေရာကနေထွက်လာတယ်။ ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ဒီနားမှာ လူတွေကလည်းကြည့်နေပြီ။
ခြေတိုတိုလေးတွေနဲ့ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်နေတဲ့ ယွန်းချီကို ခန့်ဝေသော် နားမလည်စွာမေးတယ်။
“ငါ မင်းကိုချစ်တာကို လူကြားထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ပြောရမှာလဲ?!”
မတိုးမကျယ်နဲ့ ခန့်ဝေသော်ကို သူ ငေါက်တယ်။ သူတို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေရပ်သွားခဲ့တယ်။ ယွန်းချီရဲ့လည်ကုတ်တွေက နမ်းပစ်ချင်လောက်အောင် နီရဲနေခဲ့တယ်။
“ငါ မင်းကို ဖက်ထားချင်လို့ မကြောက်တတ်ရင်တောင် ကြောက်ဟန်ဆောင်ပြီး ငါ့ရင်ထဲ ဝင်တိုးပေးပါလား…”
ယွန်းချီရဲ့လက်တွေကပိုပြီး တင်းကြပ်သွားတယ်။ ခန့်ဝေသော်ကပဲ ယွန်းချီကို အသဲယားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ယွန်းချီကလည်း ခန့်ဝေသော်ကို အသဲယားပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူ ခန့်ဝေသော်ကို အတင်းဖက်ထားချင်တော့တယ။် တကယ်ပါပဲ။ ဒီလူသားလေးက သူ့ကို ရင်ခုန်အောင် တအားလုပ်တာပဲ။
ဒီလိုနဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေအတိုင်းပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြောင်းကို ဖွင့်ဟဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သြော် သူတုိ့ကြည့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ သူတို့က ဇာတ်လမ်းပြီးသွားတာတောင်မှ ဇာတ်လမ်းပြီးသွားလားဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
MaskMelon 20.12.2019, 12:55 5